Farira Vakinankaratra : ezahina ny manarina ny voly ovy | NewsMada
Farira Vakinankaratra : ezahina ny manarina ny voly ovy
Malaza amin’ny famokarana ovy ny faritra Vakinankaratra. Avy any avokoa ny 80 %-n‘ny vokatra, amin’ny karazany maro, eto an-toerana. Tato anatin’ny 5 taona anefa izay, nidina ambany dia ambany ny vokatra, noho ny aretina “bactériose” manimba azy. Tsy voafehin’ny tantsaha ny voly ovy, nitarika fahavoazana any amin’ny kaominina maro, Faratsiho, Antanifotsy, Betafo, Manandona. Any Manandona fotsiny, simba avokoa ny voly amina velaran-tany 200 ha, nanomboka ny taona 2013, ary mbola tsy tafarina hatramin’izao.
Fatiantoka goavana ho an’ny tantsaha izany. Raha nisy 35.000 t ny vokatra manerana ny faritra Vakinankaratra talohan’ny taona 2010, tsy misy afa-tsy 7.000 t sisa, na latsaka izany amin’izao fotoana izao. Ankoatra ny aretina, antony iray lehibe nahatonga izany koa ny fiakaran’ny hafanana be loatra, tafakatra 32 ° C any amin’ny faritra Vakinankaratra, izay tsy tokony hihoatra ny 26 ° C ho an’io karazam-boly io.
Tohanana koa ny any Amoron’i Mania
Sarotra izao ny fahitana masomboly azo antoka. Fa nitadiavana vahaolana izany, manampy amin’izany ny Ceffel amin’ny lafiny teknika ho fanatsarana ny masomboly. Tsy ao Vakinankaratra ihany ny nanaovana izany fa any amin’ny faritra Amoron’i Mania ihany koa, ahitana mpamboly ovy betsaka. Tsy maintsy ifantohana akaiky ny fanarenana io karazam-boly io raha tiana ny hanavotra ny foto-piveloman’ny tantsaha any amin’ireo faritra roa mpamokatra ovy ireo.
Ezahina ny fanohanana ny lafiny teknika miaraka amin’ny fikambanana samihafa, ho an’ny tsena eto an-toerana sy aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Nanokanana velaran-tany 3 ha, karazana torolalana, ny ao Vakinankaratra hahazoam-bokatra manara-penitra ho an’ny varotra any ivelany.